केही रमाइला तथा उपयोगी नेपाली कम्प्युटर टिप्सहरु ।
गुगलदाईको सहयोगले इन्टरनेटको संजालमा रमाइरहदाँ भेटिएका केही रमाइला तथा उपयोगी कम्प्युटर टिप्सहरु यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु । आशा छ मन पराइदिनुहुनेछ ।
हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा बिना नाम कुनै पनि फोल्डर बनाउन सकिदैँन तर यो टिप्स प्रयोग गरेपछि हजुरले नामै नभएको फोल्डर तयार पार्न सक्नुहुनेछ । जसको लागिः
1. कुनै एउटा फोल्डरमा राइट क्लिक गरी Rename मा क्लिक गर्नुहोस ।
2. अब नाम मेटिदिनुहोस(Delete) र खाली बनाउनुहोस ।
3. अब Keyboard मा रहेको alt Button एउटा औलाँले च्यापेर 0160 टाइप गर्नुहोस अनि इन्टर दबाउनुहोस ।
यति गरेपछि हजुरको फोल्डर नामबिनाको हुनेछ ।
अब हजुरको कम्प्युटरको स्पीड बढाउने सजिलो टिप्स ।
1. Start Button मा क्लिक गरी Run मा क्लिक गर्नुहोस ।
2. अब Run Box मा regedit लेखि OK मा क्लिक गर्नुहोस ।
3. अब चित्रमा झै पहिला HKEY_CURRENT_USER अनि फेरी Control Panel र Desktop मा क्लिक गर्नुहोस
4. अब चित्रमा झै Menu Show Delay मा Right क्लिक गरी Modify मा क्लिक गर्नुहोस र 400 लाई हटाई 000 लेखी Ok मा क्लिक गर्नुहोस ।
5. अब एकचोटी हजुरको Computer Restart गर्नुहोस ।
हजुरले पहिला भन्दा आफ्नो कम्प्युटरको स्पीड बढेको महसुस गर्नु हुनेछ ।
Funny Microsoft Word Tips
अब फेरी एउटा रमाइलो टिप्स । यो चाहिँ हामी सबैले प्रयोग गर्ने Microsoft Word सँग सम्बन्धित छ है ।
1. पहिला Microsoft Word खोल्नुहोस अनि तल रहेको शब्दलाई कपी गरी पेस्ट गर्नुहोस ।
छैन त रमाइलो ।
Check whether your anti-virus working or not .
अब फेरी एउटा उपयोगी टिप्स ।
यो टिप्सले हजुरले प्रयोग गरिरहनुभएको anti-virus ले राम्ररी काम गरेको छ, छैन थाहा पाउन सहयोग गर्नेछ ।
सर्वप्रथम Notepad वा Wordpad खोल्नुहोस र तल दिइएको कुरा लेखेर Save गर्नुहोस । Save गर्दा eicar.com नाम दिनुहोस । यस्तो गर्दा यदि हजुरको anti-virus ले सेभ गर्नबाट रोक्छ भने हजुरको anti-virus ले राम्रो काम गरिरहेको तर यदि रोक्दैन भने हजुरको anti-virus फेर्दा हुन्छ ।
Funny Tips : Flip all of your browser pics
अब अन्तिममा फेरी एउटा रमाइलो कम्प्युटर टिप्स ।
तल दिइएको कुरा Copy गरी हजुरले नेट चलाउन प्रयोग गरीरहनु भएको Browser को address bar मा Paste गर्नुहोस ।
रमाइलो छ नि है । पुन पहिलेको स्थितीमा जान Refresh वा Reload गर्नुहोला ।
गुगलदाईको सहयोलले भेटिएका यि रमाइला तथा उपयोगी नेपाली कम्प्युटर टिप्सहरु मनपरेमा फेसबुक दाई, टिव्टर दाई र गुगलप्लस दाईसित शेयर गरिदिनुहोला ।